दुताबास एनओसी प्रकारण : दुतावासको कमजोरी ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणको सुबिधामा कटौती - Everest Dainik - News from Nepal
दुताबास एनओसी प्रकारण : दुतावासको कमजोरी ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणको सुबिधामा कटौती
यूएई, असार ३० । उदयपूरका घनश्याम राई श्रीमतीलाई दुबई घुमाउनको लागि श्रीमतीको भिसा लिएर ‘एनओसी’ लिन अबुधाबीस्थित नेपाली दुताबास पुगे । दुतावासका कर्मचारीले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै उनलाई एनओसी दिन मानेन । उनी निराश भएर फर्कदै थिए । दुतावासको परिसरभित्र रहेका एक जना ब्यक्तिले उनलाई बोलाएर के भएको भनेर सोधे । आफूले काम गरिदिने भन्दै नजिकैको एक ट्राभल्समा लगे । हजार दिराम लाग्ने शर्त राखे । अन्तिममा ८ सय दिर्हाममा काम फत्ते भयो ।
भोलिपल्ट दुताबासबाट एनओसी जारी भो । ट्राभल्सले एनओसी नेपालमै रहेकी आफ्नी श्रीमतीको हातमा थमाईदियो । एक हप्ता पछि श्रीमती निर्बाध रुपमा दुबई आईन् । एनओसी लिन जाने ब्यक्तिसँग के कागजात अपुग थियो ? उनीसँग घरको टेनेन्सी कन्ट्र्याक्ट थिएन । राईले दुबईको महँगीमा एक्लै आफ्नो नाममा फ्ल्याट लिन सक्ने कुरै भएन । उनले अरु कसैले लिएको फ्ल्याटमा शेयरिङ्गमा एउटा कोठाको महिनाको २ हजार दिर्हाम भाडा तिर्ने शर्तमा तीन महिनाको लागि श्रीमती घुमाउन दुबई बोलाउने योजना थियो ।
राई विगत ७ वर्षदेखि यूएईमा छन् । विवाह गरेको ५ बर्षभन्दा बढी भयो । हालसम्म पनि एक सन्तानको बाबु बन्ने उनको रहर पूरा भएको छैन । हरेक २ वर्षमा नेपाल छुट्टीमा जाने राईले यसपालि श्रीमतीलाई दुबई बोलाउने निर्णय गरेर भिसा निकालेका थिए । आफ्नो सन्तानको चाहनालाई पुरा गर्न पनि दुताबासलाई ८ सय दिर्हाम घुस खुवाउनु पर्ने कस्तो बिडम्बना ?
याे पनि पढ्नुस पाकिस्तानमाथि भारतको ऐतिहासिक जित, रोहित र शिखरको शतक !
अवुधावीबाट ३ सय किमी टाढा रहेको रस अल खेमाबाट गत महिना एकजना नेपाली दुतावास पुगे । छोरोलाई यूएई ल्याउनको लागि नाता प्रमाणपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने थियो । नेपालको सरकारी निकायबाट जारी उक्त पत्रमा नेपालस्थित यूएई दुतावासको नभएको भन्दै दुताबासबाट उनलाई फर्काईयो । त्यहीभित्र भेटिएका एक ब्यक्तिले उनलाई नजिकैको ट्राभल्समा लिएर गए । ती ब्यक्तिलाई ३ सय ८० दिर्हाम तिरेपछि केही छिनमा उनको प्रमाणपत्रमा छाप लाग्यो ।
माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् । पछिल्लो दिनहरुमा दुतावासमा भ्रष्टाचारले चरमरुप लिएको थियो । दलालहरुको मिलेमतोमा दैनिक २०–३० वटासम्म भिजिट भिसालाई एनओसी जारी गर्ने कार्य हुन थाल्यो । ती ३० वटामध्ये १० वटा भिसा वास्तविक श्रमिकका परिवार हुन्थे भने बाँकी २० वटा सेटिङमा जारी हुन्थे । एउटा एनओसी जारी गरेको ब्यक्ति हेरी ७ सयदेखि एक हजार दिर्हामसम्म लिईन्थ्यो ।
सामान्यतः अप्ठेरो अवस्थामा बाधा फुकाउन गरिने कूटनीतिक सिफारिस आमरूपमा हुन थालेको पाइएपछि नेपालको अध्यागमन विभाग नै आश्चर्यमा परेको थियो । दूतावासको पत्र लिएर भिजिट भिसामा दैनिक औसत दुई दर्जन नेपाली दुबई जाने गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिएको छ । कतिपय दुबई हुँदै लिबिया, ईराक जाने गरेका छन् । मानव तस्करहरुले दुबई हुँदै यूरोप लाने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।
याे पनि पढ्नुस नक्कली भिसामा नक्कली श्रम दलालसँग प्रशासन कै मिलोमतो, युएइमा नेपाली अलपत्र ।
के हो एनओसी ?
‘अंग्रेजी’ शब्द एनओसीको पुरा रुप ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ हो । अर्थात यूएई आउनको लागि दुताबासको सिफारिसपत्र । सोही सिफारिस पत्रको आधारमा यूएईमा कार्यरत नेपालीका आफन्तहरु निर्बाधरुपमा यूएई आउने गरेका थिए । विशेषगरी ५ वटा नाता पर्नेलाई दुतावासले सिफारिस जारी गर्ने गरेको थियो ।
दैनिकरुपमा धेरैजना नेपाली सिफारिसपत्र लिएर अध्यागमन पुग्ने गरेकोले दुरुपयोग भएको हुनसक्ने भन्दै अध्यागमनले शंका ब्यक्त गरेपछि बदमासी ढाकछोप गर्नको लागि अवुधावी दुताबासले हिजो एक सूचना जारी गर्दै एनओसी जारी गर्न बन्द गरेको जानकारी गराएको हो । सुचनामा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणका लागि भिजिट भिसामा आउन चाहने संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत नेपालीहरुका नजिकका नातेदारहरु श्रीमान वा श्रीमती, आमा, बुवा, सासु, ससुरा र छोराछोरी लाई यस राजदूतावासबाट जारी गरिँदै आएको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) २०७६।०३।३० गतेदेखि जारी नगरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।’
सूचनाले यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको आफन्तको लागि जारी गरिदै आएको एनओसी बन्द गर्ने निर्णय भएको बताएपनि सहजरुपमा कसरी आउन सक्छन भन्ने विकल्पको बारे मौन रहेको छ । यसअघि यूएईमा कार्यरतका आफन्तहरु एनओसी लिएर निर्बाधरुपमा अध्यागमन पार गर्थे । एनओसी जारी नगर्ने भएपछि उनीहरुले समेत दलालहरुको भर पर्नु पर्ने भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बाम गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने प्रवासी मञ्चको दावी
दुतावासकै कर्मचारीको मिलेमतोमा एनओसीको दुरोपयोग हुने गरेको छ । अवुधावी दुतावासले दैनिक १५ वटा एनओसी जारी गर्ने गरेपनि अध्यागमन विभागमा एनओसी लिएर सयौका संख्यामा नेपाली पुग्ने गरेका थिए । दुतावासकै मिलेमतोमा दलालहरुले १ हजार दिराममा एनओसी बिक्री गर्ने गरेका श्रोतको दाबी छ । दलालहरुले कतिपय एनओसी नक्कली समेत बनाउने गरेका छन् ।
१० बर्ष अघिदेखि जारी गर्न सुरु गरिएको एनओसी एकाएक बन्द गरिदा सर्वसाधारणले आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् । दुतावासमा हुने गरेको बदमासी लुकाउन सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने गरिएको एनओसी बन्द गरिएको आम सर्वसाधारणको बुझाईरहेको छ । दुरुपयोगको छानबिन नगर्ने, भ्रष्ट कर्मचारी र दलाललाई कारबाही नगर्ने तर आम जनताले पाउने सुबिधा बन्द गरेको भन्दै दलालहरुको मिलेमतोमा कामदारहरुले पाएको सुबिधा खोसिएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन् ।
दुताबासले सुचना जारी गर्नुअघि आइतबार नै एनआरएन युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठसहित राजनीतिक दलका भातृ संगठनका नेताहरु श्याम कंडेल, चित्र केसी, विश्व शाह लगायतलाई दुताबासमा बोलाएर निर्णयको समर्थनमा बोल्न भनेको थियो । गृह र परराष्ट्रको निर्देशन आएको छ, दुताबासले एनओसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ, सर्वसाधारणलाई बुझाएर तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्‍यो, राजदुत ढकाललाई उदृत गर्दै उपस्थित मध्येका एकले भने । दुताबास पुगेकाहरु हाल दुताबासको उक्त गलत कार्यको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।
ट्याग्स: meghraj sapkota, UAE